Soo -saare ayaa iMac G4 u beddelaya Silicon Apple | Waxaan ka imid mac
Soo -saare ayaa iMac G4 u beddelaya Silicon Apple ah
Toni Cortes | 11/10/2021 12:00 | Xanta
Waxay u muuqataa in farsamayaqaan qalab xariif ah uu ku guulaystay inuu bedelo a iMac G4 laga bilaabo 2002 ee Silicon Apple awood leh oo leh processor M1. Adeerku wuxuu sharraxayaa in uu processor -ka M1 ka saaray Mac mini hadda oo uu u beddelay G4 kii uu markii hore sitay. Intaa ka dib, waxaad rakibtay macOS Big Sur, waxayna u shaqeysaa dhibaato la'aan.
Markaa doon si dhakhso ah Ma aaminsani. Xaqiiqdii waxay noqon doontaa been abuur inaad la joogto qaar ka mid ah fanboys Apple oo aan waxba galabsan. Laakiin horumariyaha ayaa ku sharraxay bartiisa Twitter -ka inuu abuurayo casharro taxane ah oo fiidiyoow ah oo sharxaya habka isbadalka qof kasta oo ku dhiirraday inuu sameeyo. Waan arki doonaa markaa ...
Soosaaraha qalabka farsamada ayaa go'aansaday inuu si gaar ah u maamuuso Steve Jobs sannad -guuradii 4aad ee ka soo wareegtay markii uu u beddelay canab -macaan 2002 iMac GXNUMX oo loo beddelay Mac cusub oo casri ah. Silicon Apple. Oo isna aad buu u kululaaday.
Developer macruufka Waraaqaha Colby Waxay u muuqataa inaad awoodday inaad beddesho iMac canabkaaga ah oo ay ku shaqayso chip -ka Awoodda PC G4 guud ahaan Apple Silicon oo si fiican u shaqeeya. Asal ahaan, Waraaqaha ayaa processor -ka M1 ee Apple ka saaray motherboard -ka Mac mini -ka ee hadda jira wuxuuna geliyey iMac -kiisa. Waxaad ku lammaanaysay isbeddelka iyada oo la casriyeeyay RAM 8GB ah.
Dabaaldegga nolosha Steve Job iyo dhiirrigelintiisa dad badan, waxaan doonayay inaan muujiyo mashruuc xamaasad leh oo aan ka shaqeynayay oo aan u malaynayo in Steve ku faani doono. Wax aan suurtogal ahayn 20 sano ka hor laakiin hadda ah.
Salaan, iMac G4 oo leh chip M1 ah. pic.twitter.com/q6zUpyFrwu
- Waraaqaha Colby (@ColbySheets) October 5, 2021
Sheets ayaa sharraxay inuusan awoodi karin inuu dhammaystiro mashruuciisa haddii uusan caawimaad ka helin casharrada YouTube laga bilaabo ururiyaha Mac guridda Pendleton115 oo ku saabsan hababka kombiyuutarka. Kuwa danaynaya inay siiyaan Macshoodii Macdanta Nolol cusub, Waraaqaha ayaa ballanqaaday inay wax badan ka sharxi doonaan qaabka goor dhow, oo ay ku jirto tutorial halkaas oo ay ku sharxayso tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah fulinta isbadalka.
Waxaan si dhab ah u aaminsanahay in wax -ka -beddelka noocaas ahi yahay mid aan macquul ahayn. Sababtoo ah qaab -dhismeedka processor -ka PowerPC G4 wuxuu ahaa gelinno 32, iyo kan chip -ka cusub ee M1 waa gelinno 64. Waxaan markaa sugi doonnaa inaan aragno casharrada ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Soo -saare ayaa iMac G4 u beddelaya Silicon Apple ah
Haddii aad beddesho boodhka oo dhan, waxaad ku habboonaan kartaa guddiga M1 saldhigga imac (oo aad u weyn), waxaad beddeleysaa korontada. Waa wax suurta gal ah
Ka jawaab AlonsodeEntrerios
Haa dabcan. Isbeddelkan oo kale dhib badan kuma yeelan doono. Kaliya isku xirka shaashadda iyo la -qabsashada macOS xallinta asalka ah ee shaashadda G4. Xaqiiqdu waxay tahay in horumariyaha uu sheeganayo inuu beddelay CPU oo uu dhigay M1. Taasina waa waxa aanan u rumaysnayn adduunka.
Sidii la filayay, Apple waxay cusboonaysiisaa taxanaha aasaaska xilli labaad
Dhamaadka xilli ciyaareedkii labaad ee Ted Lasso. Hannah Waddingham iyo Juno Temple waxay ka wada hadlaan taxanaha